U HADLI MAAYO QABÌIL SABABTOO AH MIDNA ISKU QABIIL MA NIHIN, ISKU DALNA MA NIHIN RUNTUNA FANTO MAAHA.
Thursday May 28, 2020 - 18:48:06 in Opinion
Khilaafka ka dhexeeya Md. Sicid Cabdilaahi Deni iyo Axmed Karaash, anigu waxaan qabaa waa mid la sii buunbuuninayo lkn haddiiba uu jiro waxa hubaal ah in Madaxweyne Dani ay isaga horyimaaddeen arrimo xagga qaddiyadda Puntland ku saabsan. Deni waa nin diblomaasi ah oo siyaasaddiisu ay aad u furfuran tahay isla markaana aad uga shaqeeya danaha Puntland isla markaana isku hawla in aanay marnaba ka wiiqmin ummaddan tashatay tacabkii ay soo wadeen muddada dheer. Waxa uu ka hadlay marar badan in shacabka reer puntland ay ilaashadaan wadajirkooda iyo isku duubnidooda waa nin ay ka muuqato bisayl badan oo siyaasadeed markaad u fiirsato siyaasadda uu ku waajahay marar badan dawladda uu hoggaamiyo Farmaajo Sixirroole. Waxa uu in badan ka hadlay siyaabaha ay ku dhismi karto dawlad Federaal ah haddii la doonayo in isla markaana daacad laga yahay. Waa shaqsi hooggaamintiisu fiican tahay oo wax badan ka fahansan dawladnimada lafteeda iyo xidhiishka siyaasiga ah ee la la sameeyo hoggaamiyeyaasha kale.
Haddaba Deni waxa uu waajahay caqabado badan oo kaga yimid Dawladda FDS oo ay dhaqankeeda tahay in ay la dagaalanto maamul goboleedyada iyada oo markasta rabta inay samaysato hoggaamiyeyaal gacan ku rimis ah oo u adeega iyaga wax micno ahna ugu fadhiyin ummada ay matalayaan. Waxa ay isku dayaan in ay minjo xaabiyaan lkn markasta wuxuu ku dilaa diblomaasiyad qarsoon oo aanay marmaba meesha ka filan.
Ugu dambayn haddii aan ka hadlo awoodaha uu leyhy madaxweyne Deni, horta isaga ayaa ah hoggaanka ugu sarreeya dalka iyo siyaasadda Puntland M/weyne ku xigeenku wuxuu u yahay assistant, waxana habboonayd inuu wax kasta ku dabagalo ninkan afka taagayaa, maadaama uu ku jiro dagaal siyaasaddeed oo adag dalkana uu ka ilaalinayo inay ay usoo dhacaan calooshooda u shaqaystayaasha Xamar fadhiya ee doonaya inay ka dumiyaan tacabkooda. M/weyne ku xigeenku waxa uu ku jiraa is adkayn aan micno buuran lahayn oo runtii aan dhaqi karin Puntland. Bal u fiirso kibirka aan meel gaadhsiisnayn ee ka muuqda Axmed aftaag, siyaasaddu maaha af la taago iyo miniiminiiye waa inuu ka tanaasulaa haddii kale waxa u habboon Deni inuu baarlamaanka horkeeno mooshinkiisa si looga taqaluso oo loo soo magacaabo cid la shaqaysa M/weyne Deni. Dhinaca kale waxa jira qolyo sii buunbuuninaya oo ka helaya arrimahan iyo qaar kale oo indho la'aan iyo qabiil ku daba galaya Axmed aftaag iyo Eydii Farmaajo Facebuugga u fadhiday oo imika meel kasta kusoo qoraya beentoodii iyo borobogaandhadii nususaacaha lagu siin jiray. Bal waxa aynu eegi doonnaa sida quruxda badan ee uu arrintaa ku soo af jari doono Dani iyo dad badan oo moodaya in ay dhibaato ka qabsan doonto arrintaa oo hadal ku gudhi doono.
W/Q: Hassan Abdi Amaan